गण्डकी विकास बैंकको ब्याज आम्दानी बढ्यो, नाफा घट्यो Bizshala -
गण्डकी विकास बैंकको ब्याज आम्दानी बढ्यो, नाफा घट्यो
काठमाण्डौ । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म गत वर्षको तुलनामा नाफा घटेको छ।
दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंककोसमीक्षा अवधिसम्म गत वर्षको तुलनामा खुद नाफा ६.६७ प्रतिशतले घटेको हो। यो वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकलेण् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
यो अवधिसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको सञ्चालन मुनाफा ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
दोस्रो त्रैमाससम्म बैंकले ६६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ५५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो।
बैंकले ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले २३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
बैंकको रिजर्भको आकार ४६.५९ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष ५७ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको रिजर्भमा बढेर ८३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
वार्षिकीकृत बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १७.८२ रुपैयाँ रहेको छ। मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) भने ११.२८ गुणा रहेको छ।
Gandaki Bikas bank Q2 2076/77
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक साधारणसभा तय, यस्ता छन्
काठमाण्डौ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो १२ औँ वार्षिक...
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म छुुट
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. को प्रदेश– ५ अन्तर्गत दाङ्ग,...
शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा १५% बोनस सेयर प्रस्ताव
काठमाण्डौ । शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको...
देवः विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक साधारणसभा तय, लाभांश र
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो १४ औँ वार्षिक...
कैलाश विकास बैंकद्वारा यूरो गार्ड वितरण
काठमाण्डौ । कैलाश विकास बैंक लि. पुतलीबजार स्याङ्गजा शाखाले बैंकको...
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा प्राणोदय आधारभूत विद्यालयलाई
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व...